Okpomọkụ Performance oke nke nkenke Blast Ihicha oven
Dị ka otu nke akụrụngwa ule akụrụngwa na bio laboratories, nkenke gbawara ihicha oven dị mfe na ọtụtụ-eji, N'ihi ya, nhọrọ dị ezigbo mkpa. The nkenke gbawara ihicha oven bụ ụdị obere ulo oru oven, na ọ bụ dị mfe mmiri mgbe nile okpomọkụ. Na ...
Kedu otu esi ahọrọ ụlọ okpomọkụ na oge iru mmiri (Nkebi Ⅲ)?
Izu gara aga, anyị kesara otu esi ahọpụta Uzo na Ule Ule nke Okpomoku na Igwe Ihu Igwe, Taa, anyị ga-achọ ịtụle akụkụ na-esote: Otu esi ahọrọ Ọnọdụ okpomọkụ nke ya. Akụkụ Ⅲ: Kedu otu esi ahọrọ Ọnọdụ Okpomọkụ nke ụlọ na-adị ọkụ mgbe niile? Naa ...
Kedu otu esi ahọrọ ụlọ okpomọkụ na oge iru mmiri (PARTⅠ ~ Ⅱ)?
Iji mee ka ndị ahịa họrọ okpomoku na iru mmiri ụlọ mgbe niile ezi uche na n'ụzọ ziri ezi, taa, anyị ga-eso otú họrọ Size na Control Usoro nke ya. Part Ⅰ: Olee otú ịhọrọ Size nke mgbe nile okpomọkụ ma na iru mmiri ulo? Mgbe ngwaahịa a nwalere (ihe ...
Ogwu ogwu, olile anya nke uwa
site ha na 21-02-06
Ọ karịala otu afọ kemgbe ntiwapụ nke ọrịa ahụ, akụ na ụba na ndụ ndị mmadụ gburugburu ụwa emetụtala nke ukwuu. Karịsịa, ọnụ ọgụgụ ndị ekwenyela na ụwa niile gafere 100 nde. Ahụike mmadụ adabala egwu na ọgwụ mgbochi ...